२० बिलियन अमेरिकी डलर निजी सम्पत्ति भएको यो अमेरिकन नेपालमा किन आउछ ? थाहा पाउनु भयो भने चकित पर्नुहुन्छ ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > २० बिलियन अमेरिकी डलर निजी सम्पत्ति भएको यो अमेरिकन नेपालमा किन आउछ ? थाहा पाउनु भयो भने चकित पर्नुहुन्छ !
काठमाडौं- विश्वका ५२ औं धनी व्यक्ति र संसारकै चर्चित गणितज्ञ । फोब्र्स म्यागजिनका अनुसार सन् २०१८ को सुरुवातमा जोसँग २० बिलियन अमेरिकी डलर निजी सम्पत्ति छ । जो पछिल्लो एक दशकदेखि हरेक दुई वर्षमा जीवनसंगिनीसँग नेपाल आउँछ र चहार्छ कालीकोट, प्युठान, म्याग्दी जस्ता विकट जिल्लाका डाँडाकाँडा।
उनीबारे थाहा पाउने बित्तिकै धेरैका मनमा उब्जिने प्रश्न हुन् यी । हाम्रो मनमा पनि यस्तै प्रश्नका पोका थिए । जिम साइमन्सको नेपाल मोहबारे दोस्रो व्यक्ति वा इन्टरनेटबाट थाहा नपाइएको होइन, तर स्वास्थ्य खबरपत्रिका टिम उनीबाटै यी कुरा जान्न चाहन्थ्यो । नेपाल आएका बेला उनीसँग भेटेर यसबारे कुराकानी गर्ने हाम्रो चाहना पूरा हुन सहज थिएन । नेपाली मात्रै होइन, उनका विदेशी निकटस्थसँग पनि हामीले उनीसँग अन्तर्वार्ता गर्ने चाहना दर्शाएका थियौं । तर, साइमन्स त्यसका लागि तयार हुने विषयमा उनीहरु सशंकित थिए । उनीबारे इन्टरनेटमा खोजी हेर्दा पनि थाहा भयो, सञ्चार माध्यमको सहज पहुँचमा छैनन् उनी।
विकिपिडियामा स्पष्ट लेखिएको छ– साइमन्स चर्चामा आउन चाहँदैनन् । सञ्चार माध्यालाई अन्तर्वार्ता त विरलै दिन्छन्।
इन्टरनेटमा खोज्दा थाहा लाग्यो, अमेरिकी अर्थ–राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल यी गणितज्ञसँग निकै कम सञ्चार माध्यामले मात्रै कुराकानी गर्न पाएका छन् । साइमन्ससँग कुराकानी गर्नुअघि उनलाई नजिकबाट चिन्ने हाम्रा एक विदेशी मित्रको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, ‘उनी मिडिया अन्तर्वार्तामा त्यति रुची राख्दैनन् । बरु त्यो समय म्याथम्याटिक्स पढाउन खर्च गर्छु भन्ने उनको धारणा छ।’
निकको नेपाल साइनो १६ वर्षअघि सन् २००२ मा २२ वर्षीय एक अमेरिकी युवा निक साइमन्स कामका सिलसिलामा नेपाल आए । सांस्कृतिक तथा भाषिक अवरोधका बाबजुद उनले ९ महिना नेपाल बसेर काम गरे । न्युयोर्क फर्किनुअघि उनी नेपालमा निरन्तर योगदान दिने निर्णयमा पुगे । अमेरिकास्थित घर पुगेपछि उनले आमालाई भने, ‘यदि मैले आफ्नो बाँकी जीवन नेपालमै बिताउन चाहें भने तपाईं अचम्ममा नपर्नुहोला।’
देशभर निक साइमन्सहरु साइमन्स परिवारले नेपालमा काम गरिरहेका अमेरिकी डाक्टर मार्क जिम्मरम्यानलाई भेटे । उनी मार्फत् सुरुमा पाटन अस्पतालमा सहयोग गरे । साइमन्स परिवारको चाहना बुझेका डा जिम्मरम्यानले त्यसपछि नेपालको ग्रामीण भेगमा पुगेर अध्ययन गरे । डा जिम्मरम्यानको समूहले स्थानीयलाई सोध्यो, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्दा तपाईंहरुलाई के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?’ धेरैको साझा उत्तर थियो, ‘डाक्टर ।’ डाक्टर आएदेखि अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउने, भाँचिएका हातखुट्टा शल्यक्रिया गरेर जोडिदिने, राम्रो उपचार पाउने ग्रामीण जनताको अपेक्षा थियो।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर अस्पताल शुद्धीकरण कार्यक्रम चलाइरहेको एनएसआईले देशका ८४ अस्पतालको व्यवस्थापनमा विभिन्न किसिमका वर्कसप, सहयोग, फलोअप लगायतका काम गरिरहेको छ । एनइएसआईले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँग मिलेर डाक्टर र नर्सका लागि विभिन्न तालिममा पनि सघाउँदै आएको छ।
प्रोत्साहन र अनुभव आदानप्रदान एनएसआईले हरेक वर्ष ग्रामीण भेगमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छ । डा साइमन्सका अनुसार आफूले भोगेका समस्या र अपनाएका उपायबारे छलफल गर्न यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । त्यसैले ९ वर्षदेखि निरन्तर ग्रामीण भेगमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी भेला गराउने काम एनएसआइले गरिरहेको हो।
सम्मेलनमै उत्कृष्ट काम गर्ने एक जनालाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गरिँदै आएको छ । यसवर्ष पालिकोट स्वास्थ्य चौकी गुल्मीका सिनियर अहेब श्याम सुन्दर पोखरेललाई पुरस्कृत गरियो । यसअघि डा तरुन पौडेल, पोषराज श्रेष्ठ, अनुग्रा ठगुन्ना, रामशरण पौडेल, यशोदा ओझा, फिरोज राना, मेघरा जबन, बलदेव पाण्डे, लोकबहादुर नेपाली र बालगोपाल श्रेष्ठ पुरस्कृत भइसकेका छन् । साभार – स्वास्थ्य खबर बाट
एक नेपाली चेलीले सामाजिक संजालमा यस्तो व्यथा,लौन मलाई बचाउनु होस्,साहुले मार्न लाग्यो,खान पनि दिदैन, म नेपाल आउन चाहान्छु – भिडियो सहित
अफगानिस्तानबाट कतार हुँदै १२७ जना नेपालीहरु काठमाडौं आइपुगे (भिडियो सहित)